Liiska xasuusta, ee guurka dalka Finland - InfoFinland
Nolosha Finland > Qoyska > Guurka Finland > Liiska xasuusta, ee guurka dalka Finland
Miyaad guursan rabtaa? Boggan waxaad ka heleysaa macluumaadka ku saabsan baaritaanka caqabadaha guurka, go’aan ka gaarista magaca qoyska, hababka nikaaxa iyo shuruudda guurka.
Guurka ka hor waa in la sameeyaa baaritaanka caqabadaha guurka (avioliiton esteiden tutkinta). Dadka xafiisyada haya ayaa waxay baaritaanka caqabadaha guurka ku ogaanayaan in ay jiraan sida uu sharciga Finland qabo waxyaabo guurka xannibaya.
Baaritaanka caqabadaha guurka waxaad ka codsan kartaa Hay’adda dijitaalka iyo macluumaadka dadka. Baaritaanka waa in qoraal ahaan loo dalbadaa. Baaritaanku wuxuu qaataa qiyaas ahaan todobaad. Baaritaanku marka uu diyaar noqdo waxaad ka helaysaa caddayn. Caddayntu waxay shaqeynaysaa afar bilood. Caddaynta baaritaanka waa in la wataa marka lagu jiro madasha meherka.
Hay’adda dijitaalka iyo macluumaadka dadku wuxuu marka uu baaritaanka caqabadaha guurka sameynayo ku saleynayaa macluumaadka lagu diiwaangeliyay nidaamka macluumaadka dadka ee Finlnad. Haddii macluumaadka xaaladdaada guurku uusan ku jirin nidaamka macluumaadka dadka ee Finland, waa in aad Hay’adda dijitaalka iyo macluumaadka dadka u keentaa caddaynta xaaladda guurka (siviilisäätytodistus) , taas oo aad ka keenayso shaqaalaha dowladda ee dalkaada. Caddaynta waxaad sidoo kale ka soo qaadan kartaa safaraadda ama qunsuliyadda dalkaada ee Finland ku taal.
Haddii aysan labada lammaane aheyn muwaadiniin Finnish ah islamarkaasna aysan deganeyn Finland, waa in caddaynta xaaladda guurka ka sokow ay Hay’adda dijitaalka iyo macluumaadka dadka u keenaan sharraxaad ku saabsan in sharciga dalkoodu uu ogol yahay in ay isku guursadaan Finland.
Ogsoonow in baaritaanka caqabaduhu uu qaadan karto todobaadyo badan, haddii caddaymo looga baahan yahay wadamo kale.
Sharciyeeynta iyo turjumidda caddaymaha
Sida caadiga ah waa in caddaymaha wadamada shisheeye la sharciyeeyo loona turjumo luqadda Finnishka, Iswidhishka ama Ingiriiska. Turjumaadda xittaa waa in la sharciyeeyaa. Haddii uu turjumaadda sameynayo turjubaan heysta ogolaanshaha Finland ama dowlad Midowga Yurub ka tirsan, looma baahna in turjumaadda la sharciyeeyo.
Caddaymaha uu bixiyay sarkaalka dowliga ah ee Waddamada Waqooyiga Yurub ama Midowga Yurub looma baahna in la sharciyeeyo. Caddaynta ay bixiso safaarad ama qunsuliyad Finland ku taal xittaa uma baahna in la sharciyeeyo.
Haddii uu bixiyay sarkaal ka tirsan wadan Midowga Yurub ah caddayn islamarkaasna lagu lifaaqay foomka EU 2016/1191, looma baahna in caddaynta la turjumo.
Go’aan ka gaaridda magaca qoyska
Finland marka ay lammaanayaashu is-guursanayaan waxay beddeli karaan magacooda qoyska.
Marka aad guursaneyso waxaad
heysan kartaa magacaada qoyska ee aad hadda heysato
qaadan kartaa magaca qoyska ee lammaanahaada ama
waxaad sameynsan kartaan magac qoys oo la isku daray.
Magaca qoyska ee la isku daray waxaa ka muuqanaya labada magac ee qoyska, tusaale ahaan Virttanen-Smith. Waxaa kale oo xittaa la kala qori karaa magacyada iyadoo aan la dhexgelinayn xariijinta dhexe.
Laammanuhu waxay magacooda qoyska u codsan karaan magac gebi ahaanba cusub. Magaca qoyska ee cusub waa in Hay’adda dijitaalka iyo macluumaadka dadka laga codsadaa. Codsigu waa lacag.
Magac qoys looma dooran karo magac uu labada lammaane midkood guur hore dartiis ku qaatay.
Lammaanahaada la dooro magaca qoyska marka aad codsaneyso baaritaanka caqabadaha guurka. Haddii aad dooneyo in aad beddesho magaca qoyskaada, ogeysii Hay’adda dijitaalka iyo macluumaadka dadka. Haddii aadan ku wargelin in aad beddelayso magacaada qoyska, magaca qoyskaadu sidii hore ayuu sii ahaanayaa.
Heshiiska shuruudda guurku ma ahan wax qasab ah. Heshiiska shruudda guurka waxaa qeyb ahaan ama gebi ahaan meesha looga saari karaa xaqa guurka ka dhasha ee uu lammaanaha kale u leeyahay hantida lammaanaha kale, marka ay is furaan ama uu labada lammaane midkood geeriyoodo ka dib. Heshiiska shuruudaha guurka waxaa la sameyn karaa guurka ka hor ama inta la isqabo. Labad lammaane waa in ay saxiixaan heshiiska shuruudaha guurka labo markhaatina waa in ay caddeeyaan in saxiixyadu ay sax yihiin. Si heshiiska shuruudaha guurku uu dhaqangalo, waa in laga diiwaangeliyaa Hay’adda dijitaalka iyo macluumaadka dadka.
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan hantida lammaanayahaasha waxaad ka heleysaa bogga InfoFinland Xuquuqda iyo waajibaadyada lammaanayaasha is qaba.
Sheshiiska shuudaha guurkaFinnish | Iswidish | Ingiriis
Doorashada habka meherka
Meherka rayidku wuxuu ka dhacaa Hay’adda dijitaalka iyo macluumaadka dadka ama maxkamadda (käräjäoikeus). Meherka diinta ku saleysan wuxuu ka dhacaa kaniisadda ama jimciyad kale oo diini ah, taas oo xaq u leh sameynta meherka guurka.
Madasha meherka waa qasab in ay labada lammaane joogaan. Waxaa kale oo qasab ah in ay goobta joogaan ugu yaraan labo markhaati oo da’ ahaan 15 sano buuxiyay.
Meherka wakhti uga qabso xilli hore Hay’adda dijitaalka iyo macluumaadka dadka ama maxkamadda ka hor inta aan la gaarin maalinta arooska. Meherka rayidku waa lacag la’aan, haddii wakhtiyada shaqada lagu sameynayo xarumaha Hay’adda dijitaalka iyo macluumaadka dadka ama maxkamadda. Meelo kale, tusaale ahaan guriga ama goobaha xafladaha ayaa lagu sameyn karaa meherka rayidka. Markaas lacag ayaa laga qaadanayaa. Meherka rayidka waxaa xaq u leh qof kasta, xittaa dadka ka tirsan firqa diimeed.
Meherka diinta u saleysan
Jimciyad diimeed kasta iyadaa iskeed u go’aaminaysa shuruudaha meherka la xiriira iyo madasha meherku nooca ay tahay. Haddii aad dooneyso meher diin ku saleysan, kala heshii jimciyad diimeedka laga hadlayo ee ka tirsan tahay.